Atomiga saacada, kan ugu saxsan ee abid binu aadam abuuray | Saadaasha Shabakadda
Waqtiga, saacadaha, daqiiqadaha, ilbiriqsiyada ... oo aan eegin kun iyo hal saac saacadaha maalintii oo dhan si uu u arko bal inuu soo daaho ama goor hore ballanta, si uu u arko inta ka hartay inaad shaqada ka tagto ama si fudud Eeg sida dhaqsaha badan ee waqtigaagu udhaco marka aad waqti fiican kuhesho baarka asxaabtaada ama qoyskaaga. Waxaa jira dad saacadda hormariya si taxaddar leh iyo kuwo kale oo meel walba ku daaha maxaa yeelay saacadda ma fiiriyaan waqtigeeda. Laakiin dhab ahaan waxaad isweydiisay naftaada su'aasha, ma jirtaa saacad sifiican iskuwarsan oo calaamadeysa waqtiga saxda ah ee qof walba?
Haa way jirtaa, waana la dhahaa saacadda atomiga. Waa saacad ku shaqeysa iyadoo ku shaqeysa miiska loo isticmaalo miisaanka atamka ama gariirka. Waa daawashada ugu saxsan ee dadku sameeyay ilaa maanta. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeyso iyo waxa ay ka samaysan tahay? Sii wad akhriska oo ogow dhammaan sirtiisa.
1 Sidee saacadda atomku u shaqeysaa
2 Isbadalka xogta waqtiga
3 Muhiimadda saacadda atomiga
4 Ma heli karnaa saacad atom oo gacmeed leh?
Sidee saacadda atomku u shaqeysaa
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, ogaanshaha waqtiga waqti kasta waxay noqon kartaa mid lagama maarmaan u ah sameynta qorshooyinkaaga maalinlaha ah oo aad ku degto. Sidaa darteed, waa inaad haysataa saacad si fiican loo dejiyey si aad si fiican u ogaato waqtiga maalinta aad tahay. Saacad goor hore ama mid dambe ah waxba nama tareyso. Waqtiga atamka atomiga tani nagama dhacayso maxaa yeelay waa ninka ugu saxsan abid ayaa abuuray.
Haddii aan isbarbar dhig ku sameyno saacadda farsamada ee dhaqameed, taas oo ku saleysa hawlgalkeeda santuuqa, kani wuu ka duwan yahay. Midka hore wuxuu la shaqeeyaa oscillation oo dhaqaajiya gearis taxane ah oo isku xiran si uu u calaamadeeyo laxanka joogtada ah ee tilmaamaya gudbinta ilbiriqsiyada, daqiiqadaha iyo saacadaha Si kastaba ha noqotee, saacadda atomku waxay ku shaqeysaa inta jeer ee kala duwanaanshaha firfircoonida atamyada ee aagga mashiinka microwave elektromagnetic.
Saacaddu waxay isticmaashaa qalab loo yaqaan Maser. Waa kumbiyuutar lagu koriyo microwave loogu talagalay shucaaca shucaaca kiciya. In kasta oo ay u muuqato mid isku dhafan, haddana wax kale ma aha oo waa nidaam awood u leh inuu ballaariyo calaamadaha ugu daciifka ah una beddelo dhinaca microwave-ka ee qaybta elektromagnetic-ka. Waxay u egtahay inay tahay leysar.
Maser-kan waxaa lagu soo qaadaa raadiye gudbiye leh soo noqnoqoshada 0,000000001 ilbidhiqsi maalintii. Xaqiijinta bam-gacmeedkani waa mid aad u weyn. Sababtaas awgeed, marka raadiyaha emitter-ka lagu daro inta jeer ee kala duwanaanta shucaaca aaladda atomiga, ion-yada jira ayaa awood u leh inay soo nuugaan shucaaca la sheegay iyo iftiinka soo-baxa. Waxaas oo dhami waxay dhacayaan iyada oo ay ugu wacan tahay qiiqa hirarka raadiyaha.
Isbadalka xogta waqtiga
Markay ionyaashu nuugaan shucaaca oo ay iftiimiyaan iftiinka, unuga sawir qaadaha ayaa qabta daqiiqada saxda ah ee iftiinka iftiinka ku baxa oo wareega wareega wuxuu kubilaabmayaa isku xirnaanta mitir. Miiska ayaa ah qaybta mas'uul ka ah in la duubo tirada jeer ee mawjadaha la filayo bilaabaan inay soo baxaan.
Dhammaan xogta laga helo miiska xilliyada uu ion iftiinka soo saaro waxaa loo gudbiyaa kombuyuutar. Waa marka dhammaan hawlgallada lagama maarmaanka u ah in loo soo diro bucshirada alaab-qaadayaasha la bilaabo in la sameeyo. Kuwa wax qaadanaya ee ugu dambeeya waa kuwa muuqaal ahaan inoo tusaya waqtiga saxda ah.
Isotope-ka loo isticmaalo in lagu nuugo shucaaca oo loo bixiyo iftiinka waa Cesium 133. Isotope-kani waa la kululeeyaa si uu atomkiisa u sii daayo, iyadoo korontada ku xiran ee ay haystaan, lagu marin karo tuubo madhan oo leh aag elektromagnetic ah oo u shaqeeya sida miiraha si kaliya atamyada ay xaaladdooda tamarta tahay tan loo baahan yahay ay dhex mari karto. .
Muhiimadda saacadda atomiga
Xaqiiqdii waxaad ka fikirtay inaad haysato saacad atom ah si aad uhesho saxnaanta adduunka ugu fiican oo aadan waligaa ka daahin meel kasta. Si kastaba ha noqotee, waa saacad loogu talagalay cilmi-baaris iyadoo la siinayo saxnimadeeda weyn. Looma isticmaali karo oo keliya waqtiga waqtiyada falcelinta kiimikada ama in lagu fuliyo tijaabooyin halka waqtigu yahay isbeddel muhiim u ah tixgelinta. Waa waxtar badan in la ogaado kala duwanaanshaha jira xawaaraha waqtiga.
Illaa iyo hadda, mid ka mid ah tijaabooyinka ugu dhameystiran uguna caansan ee saacadda atamka loo adeegsaday ayaa ah in diyaarado loo diro jihooyinka iska soo horjeedka ee Dunida. Markay diyaaraduhu ka baxaan asalkoodii, saacad baa la bilaabay waxaana la qiyaasayaa waqtiga ay qaadanayso inay labaduba yimaadaanba. Tani waa sida loo xaqiijiyay taas xiriir gaar ah ayaa haya. Tijaabo kale ayaa ah in saacad atom ah la dhigo qeybta hoose ee dhismayaasha dhaadheer iyo mid kale saqafka si loo arko faraqa u dhexeeya labadooda. Noocyada tijaabooyinka waxaad u baahan tahay saacad si sax ah u saxsan.
Waqtigan xaadirka ah, saacadan atomku waxaa loo isticmaalaa sameynta satellites-ka GPS-ka ee aan ku baran jirnay inaan ku isticmaalno taleefannada casriga ah ama baabuurta. Sidaa darteed, waqtiga qalabkani waa mid aad u sax ah. Wixii laga arki karo, ma laha adeegsiga shaybaar xaddidan, laakiin si dadban ayaa loo wada adeegsadaa kulligeen.
Ma heli karnaa saacad atom oo gacmeed leh?
Yaan rabin inuu haysto saacad sida saxda ah tan gacantooda ku jirta si ay u aado meel walba iyagoo og waqtiga saxda ah. Si kastaba ha noqotee, saacadaha atomiga marna ma gaari karaan gacmaheena. Dhibaato weyn ayaa haysata waana taas si loo helo saxsanaantaas wanaagsan waxay u baahan yihiin jawi aad u deggan iyo heerkul aad u qabow. Kaliya waa jawiyadan in saxnaanta saxda ah ee saacadda atomku soo muuqato.
Dhinaca kale, saacadaha aan hadda heli karno iyagu waa kuwo sax ah waana la qiyaasey inaysan lahaan laheyn ikhtiyaarro suuq oo waaweyn. Marka la eego qaybaha ay ka kooban tahay iyo dhibta ay ka haysato dayactirka, waxay noqon laheyd saacad qaali ah oo aan ka yeelin suuqyada. Ma jirto rajo badan oo iib ah oo dhiirrigelisa horumarinta farsamooyinka lagu haysto saacadda saacadda atomiga.
Waxaad si joogto ah u fiirsan kartaa dadka adduunka ku nool ee aan garanaynin waxa lagu sameeyo lacagtooda waxaana laga yaabaa in kooxdan dadka ahi ay diyaar u yihiin inay bixiyaan qiimo aad u sarreeya oo ah saacaddan oo kale oo sidaas ugu saxsan curcurka. Kaliya in la yiraahdo waxay leeyihiin wax u gaar ah oo ka duwan dadka kale waxay noqon kartaa ikhtiyaar suuq wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, waa nooc ka mid ah saacadaha oo aad muhiim ugu ah sayniska taas oo ka caawinaysa in si fiican loo fahmo adduunka aan ku nool nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Saacadda Atomiga